Imidlalo | KONGOLISOLO
Wonke umuntu ubheka izinto ngezibuko zakhe; ube nesikhathi sokubheka izinto ngisho nemizuzu emibili, ngeke wehluleke ukuthola ukuthi bakwembulela ini ngokwabo: yini into ethandwa futhi evamile yalezi zibalo ezimbili esithombeni?
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 14, 2020 12: 37 Awekho amazwana
Kungenzeka kube sobala kulabo abanganaki, kepha kunoma yimuphi umuntu onolwazi, uzothola ukuthi yi "Mouth". Futhi inja nendoda, ...	Funda kabanzi
Ukwethembeka, ukwethembeka, isithembu, ukukhungatheka, ubunzima: isabelo sendoda ngayinye othandweni noma empilweni yomshado; kumuntu ngamunye ukuba abekhona, ikuphi indawo yakhe, ukuleso sigaba sini
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 14, 2020 03: 24 Awekho amazwana
1. Amadoda angempela athembekile. 2. Amadoda athembekile anesithembu. 3. Abesilisa abakhungathekile nabadidiyelwe bashada futhi abathembekile. Iqiniso noma amanga? Sithandwa KongoLisoloi & KongoLisoloise ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 10, 2020 14: 51 Awekho amazwana
Amadevu: njengegama lesifazane, kulesisodwa, "Uqoqo lwezinwele ezikhula ngaphezu komlomo ophezulu emadodeni". Isibonelo, sizothi: uqala ukuba ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 20, 2020 00: 50 Awekho amazwana
Amasela eza azothatha izimvu edolobhaneni futhi wonke umuntu wayengajabule - Susa izinhlamvu ezimbili kulo musho ezizokwenza lo mzana "ujabule" Yini lezi ...	Funda kabanzi
Ibhola Elingcwele: omunye wemidlalo eqoqiwe eyingqayizivele yesikhathi sasendulo, bekungumdlalo weSky Sacred owawusetshenziswa ikakhulukazi eCentral America naseningizimu ye-United States.
Lo mdlalo bekumele umelele iqanda lokuqala, i-bonging bing, futhi wadlalelwa okokuqala eminyakeni eyi-1000 ngaphambi kwesikhathi sethu ngabase-Afro-Olmecs ababehlala ngasechibini leMex ...	Funda kabanzi